I-Huawei FreeBuds 4, ukucolisiswa komkhiqizo ocishe uphelele [Buyekeza] | Izindaba zegajethi
I-Huawei FreeBuds 4, ukucolisiswa komkhiqizo ocishe uphelele [Buyekeza]
UMiguel Hernandez | 18/08/2021 12:00 | General, Izibuyekezo
Kwi-Actualidad Gadget sikulethela umkhiqizo womsindo futhi, usuyazi vele ukuthi sifuna ukukugcina unolwazi ngezindaba kuwo wonke amabanga, futhi uHuawei ungomunye wabakhiqizi abanikeza ezinye izindlela ngamabanga ahlukene wamanani. Ukulandela impumelelo ye-FreeBuds 3, iHuawei icwenga imodeli futhi iyenze icishe iphelele.
Thola nathi i-Huawei FreeBuds 4 entsha, ama-headphone amasha we-TWS anokukhanselwa komsindo okusebenzayo kakhulu. Sihlaziya zonke izici zayo, amandla nobuthakathaka kulokhu kubukeza okujulile, ngabe uzokulahla? Siyaqiniseka ngokuphelele ukuthi cha, sijoyine kulokhu kuhlaziywa okusha.
Uma ubheka inqwaba yezibuyekezo uzobona ukuthi abahlaziyi abaningi bayavuma ukuthi lawa maHuawei I-FreeBuds 4 Yilawo mahedfoni entengo asezingeni eliphakeme emakethe lapho sikhuluma ikakhulukazi ngama-headphone avulekile, kepha sithanda ukukunikeza umbono wethu, futhi ngalokhu kufanele siwahlole ngokujulile… Asihambe!
Ubathandile? Zithenge ngesaphulelo esifika ku-20% ku-Amazon.
1 Ode ukuvula ama-headphone wokuvula
3 Ikhwalithi yomsindo nokurekhoda "hache-dé".
4 Ukuzimela nombono womhleli
Ode ukuvula ama-headphone wokuvula
Ama-headphone asezindlebeni mahle kakhulu, mahle kakhulu uma ungawadedeli, ikakhulukazi uma unenye yalezo zindlebe ezimbalwa onjiniyela bezinkampani ezibonakala bezikhathalela lapho benza ama-headphone abo we-TWS, muhle kakhulu ngokwenza ukukhanselwa komsindo okusebenzayo kwekhwalithi. AbakwaHuawei bacabange ngabo bonke labo basebenzisi abanenzondo ngama-headphone asezindlebeni noma ngoba basilahla noma besilimaza, futhi banqume ukusithinta ngokukhanselwa komsindo okusebenzayo ngalokhu IHuawei FreeBuds 4, ecishe ifane neHuawei FreeBuds 3 ekwakhiweni, futhi engikucabanga ngobuqotho njengokuzikhethela kwami ​​kuphela. Ngaphandle kwalokhu, kwi-Podcast esiyenzayo ngokubambisana ne-Actualidad iPhone uzokwazi ukubona ukuthi bengisebenzisa i-Huawei FreeBuds 4i izinyanga, ukuphikisana nenjongo (bekungafanele nginikeze i-Huawei FreeBuds 3 yami).
Imibala etholakalayo: Mhlophe nesiliva
Imikhono Abicah: Okuluhlaza okotshani, owolintshi, oluhlaza okwesibhakabhaka nomnyama
Ngomklamo wazo ovulekile, la maFreeBuds 3 ahlala endlebeni, angawi, ngaphandle kokukuhlukanisa, ngaphandle kokukuphazamisa. Sinobukhulu bento ngayinye yendlebe engu-41,4 x 16,8 x 18,5 mm ngama-gramu ayi-4 kuphela, ngenkathi icala lokushaja, eliguquke laba ngosayizi ohlangene kancane kunenguqulo yangaphambilini, lihlala kumamilimitha angama-58 x 21,2 ngamagremu angama-38 (lapho lingenalutho).
Umphumela uba induduzo engakaze ibonwe kumahedfoni, futhi ukwakheka ebhokisini okwenza kube ngumngani walabo bhulukwe abanamathele kabusha esibagqoka namuhla, akukhathazi, kusetshenziswa kalula ngesandla esisodwa futhi ikhwalithi yokwakha, njengenjwayelo eHuawei, yinhle ikakhulukazi.
Ngikutshele okuningi, futhi angikaze ngisho lutho kuwe. Okwethuthuke kakhulu kwesigaba esizokunikeza uchungechunge lwemininingwane ethokozisayo, ake sikhulume ngezici zobuchwepheshe. Sine-Bluetooth 5.2, iHuawei izibophezele enguqulweni yakamuva etholakala emakethe ukunciphisa ama-latency nokwenza ngcono ukuxhumana. Njengawo wonke amanye amadivayisi we-FreeBuds esiwamatanisa ngokuvula okuzivelelayo, okungukuthi, ukuvumelanisa okuzenzakalelayo namadivayisi we-Huawei (EMUI 10 noma ngaphezulu), sicabanga ukuthi nge-chip yeNFC ekhawulelwe.
Sinomshayeli wamamilimitha ayi-14,3 ngeyunithi ngayinye ethembisa umsindo wencazelo ephezulu, i-earphone ngayinye inenjini yayo yokukhiqiza ukudlidlizela okukhulu ku-diaphragm, lokhu kuhumusha kube ngama-bass azokhipha abathandi bomculo bezentengiselwano, bese sizokhuluma ngokuningiliziwe ngalolu hlobo lomsindo. Ububanzi bemvamisa, ngenxa yesilawuli I-LCP ifinyelela ku-40 kHz, ngakho izingodo namanothi aphezulu ayaqiniswa.
Ikhwalithi yomsindo nokurekhoda "hache-dé".
Ikhwalithi yomsindo wayo ayinakuphikwa, esinayo ama-bass aqiniswe ngokukhethekile (ama-bass) nokuthi abathandi bomculo omncane wentengiso bazokwazi ukukuqukatha ngohlelo lokusebenza lweHuawei lweHuawei, olutholakala kuzo zombili i-Android ne-iOS. Sinamanothi aphezulu naphakathi nendawo amahle kakhulu esikuzwile kuze kube manje, ikakhulukazi kumahedfoni avulekile, lapho kungathikamezeka khona ngomsindo ozungezile noma ukuhlanekezela. UHuawei ugobe umgoqo ngekhwalithi yomsindo yalezi headphone uma sibheka ukuthi "zivulekile", into engeke yathokozelwa yiwo wonke umuntu.
Njengoba iHuawei ingafuni ukushiya ngemuva abasebenzisi abaphika ama-headphone asezindlebeni, ithathe isinqumo sokuqhubeka nokusebenza endaweni lapho amanye ama-brand amaningi ayesevele eyilahlile ngqo, ngalokho asinikeza I-ANC 2.0 ethembisa ukufika kuma-25db okucishwa komsindo ngaphandle kwesidingo sokufaka injoloba ecasulayo ezindlebeni zethu. Njengoba indlebe ngayinye yehlukile, izinzwa nemakrofoni zeFreeBuds 4 zizohlaziya zinikeze uchungechunge lwezinguquko ezivumela ukukhanselwa komsindo okulungile.
Kunzima uma kungenakwenzeka ukwazi ukuthi ngabe zonke lezi zithembiso zenziwa ngasikhathi sinye, okuwukuphela kwento esingahlulela ngayo ukukhanselwa komsindo, futhi ngiyaqinisa ngaphandle kokwesaba ukuthi ngiyiphutha okungcono kunakho konke okwake kwafakwa kumahedisethi 'avulekile', ngomehluko omkhulu. Angikuboni neze ukuphazamiseka nekhwalithi yomsindo futhi ukukhanselwa kungaphezu kokwanele ukusetshenziswa kwansuku zonke.
Banazo futhi Ukuqoshwa kwe-HD okungama-48 kHz sibonga izindlela ezimbili zokumisa:
Imvelo: Sizothatha imisindo ezungeze isitiriyo
Amazwi: Ngokuqashelwa kwemvamisa yezwi, kuzocwenga umehluko futhi kushiye imvelo ngemuva
Kunzima ukuchaza Ngincoma ukuthi ubuke ividiyo ye-Androidsis lapho senza khona ukuhlolwa komsindo kwemakrofoni. Ungazithenga ngentengo enhle kakhulu futhi ngaphandle kwezindleko zokuthumela, ungakhohlwa.
Ukuzimela nombono womhleli
Sinokuzimela okuphelele kwamahora ama-4 kumahedisethi ngamunye i-ANC ingasebenzi futhi Amahora ama-2,5 ne-ANC ivuliwe. Njengoba icala selibekwe icala ngokugcwele sizofika emahoreni angama-22 ngaphandle kwe-ANC nasezinsukwini ezingama-14 sesibekelwe i-ANC. Ukuhlolwa kwethu sekucishe kwacishe kwasondela ekuzimeleni okuhlinzekwa yiHuawei, ethembisa ukudlala amahora ama-2,5 ngemizuzu engu-15 kuphela yokukhokha. Ngokusobala, sinokushaja okungenantambo (uma sikhokha amanye ama-euro angama-20 ...).
Ngale ndlela, iHuawei FreeBuds 4 ibhekwa njengenye yezindlela ezinhle kakhulu (ngokombono wami inketho engcono kakhulu) yama-headphone we-TWS avulekile ngenxa yekhwalithi, ukukhiqizwa nokuhambisana. Ziyathengiswa e-Amazon, ungabathenga kusuka kuma-euro angama-119 (Intengo ejwayelekile yama-euro ayi-149), kanye newebhusayithi esemthethweni ye- Huawei.
Kuthunyelwe ku: 18 Agasti 2021
Ukulungiswa kokugcina: 8 September ka-2021
Izinto zokwakha, ukuklama, induduzo nokwenziwa
Ukukhanselwa komsindo okusebenzayo
Ikhwalithi / Intengo
Ibhokisi liklwebheka kalula
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » I-Huawei FreeBuds 4, ukucolisiswa komkhiqizo ocishe uphelele [Buyekeza]
ILIFE H70, umshini wokuhlanza ongenantambo obewufuna
I-SPC Smartee Boost, i-smartwatch ngentengo ephansi kakhulu